आज ओली सरकारले ठुलो निर्णय लिंदै ! सर्वसाधारणमा छाउने छ खुसियाली ! – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/आज ओली सरकारले ठुलो निर्णय लिंदै ! सर्वसाधारणमा छाउने छ खुसियाली !
काठमाडौं –प्रधानमन्त्री ओलीले केही महिनाअघि मात्र भनेका थिए, ‘कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपाली भूमि हो, त्यहाँबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउँछु ।’ कालापानीबाट भारतीय सेना भारतलाई फिर्ता र नेपाली भुमि नेपालमा फिर्ता ल्याए ओलीको राष्टवादी देखेर सगरमाथाले सम्मानको .शिर निहुँर्याउने छ । अन्यथा सडक बल्नेछ, संसद घेरिनेछ, वालुवाटारको घरेलु बैठक छोडेर ओली विवस यात्रामा निस्किनुपर्ने छ ।
कम्यूनिष्ट सरकारका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वास्तविक अग्निपरीक्षा शूरु भएको छ । कोरोनाको महामारीबाट नागरिक बचाउने कि, भारतीय विस्तारवादबाट भूमि जोगाउने ? प्रधानमन्त्री ओली अहिले दुई अग्निपरीक्षाको कठघरामा उभिएका छन् ।
५० बर्षको कठोर राजनीतिक यात्रापछि प्रधानमन्त्री ओली देशको कार्यकारी पदमा छन् । राजनीतिक यात्रा थाल्दा नागरिक मुक्तिको कसम खाएका ओलीको कोरोना महामारीले परीक्षा लिइरहेको छ । चीन र अमेरिकामा चल्ने बुलेट ट्रेनकै गतिमा कोरोना भाइरस फैलिन थालेको छ । कोरोना नियन्त्रण गर्न सकिएन भने, कलिलो उम्मेरमा ओलीले खाएको नागरिक मुक्तिको कसम बृद्ध अबस्थामा पुग्दा चक्नाचुर हुनेछ ।
बहुमत प्राप्त पार्टीको शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीमा सपथ खाँदै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा वाचा गरेका थिए, ‘रोग र भोकबाट कुनैपनि नागरिकलाई मर्न दिँन्न ।’ समयको चक्रले ओलीलाई आफ्नै बाचाको कठघरामा खडा गरिदिएको छ । कोरोनाको महामारीमा रोग र भोकले नागरिकले ज्यान गुमाएनन् भने ओली इतिहासको पन्नामा सम्झना र गर्व गर्न लायक राजनेता हुनेछन् । अन्यथा विरोधीले लगाउने गरेको अखाने र गफाडी आरोप प्रमाणित हुनेछ ।
सरकारले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरासहितको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेलगत्तै निशान छाप परिवर्तनका लागि संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक आज (शनिबार) पारित हुने भएको छ । यो ऐतिहासिक निर्णयसँगै अब मुलुकको संविधान तथा निशान छापमा समेत लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नक्सा समावेश हुनेछ ।
करिव दुई महिना लकडाउन गर्दा पनि नेपालमा कोरोना नियन्त्रणमा आएन । भारतीय प्रहरीले नेपालमा कोरोना फैलाइरहेको छ । भारतमा बसिरहेका नेपालीहरुलाई गाडीमा राखेर सीमामा ल्याउने र चोरबाटा देखाएर नेपाल पठाउने काम गरिरहेको छ । कोरोना महामारीमा दुई देशबीच भएको सहमति भारतीय प्रहरीले उलंघन गर्दा पनि ओली सरकार मौन छ । जसको परिणाम दिन दुई गुना रात चार गुना कोरोनाको संक्रमण बढीरहेको छ ।
कालापानीको पुरानो विस्तारवादी रोगबाट देशलाई मुक्त गर्ने कार्यभार ओलीलाई यतिबेला नै थपिएको छ । सन् २०६२ मा इन्डो चाइना युद्धका बेला भारतले नेपाली भूमि कालापानीमा आफ्नो फौज राखेको थियो । करिव ७० बर्षअघिको भारतीय विस्तारवादी रोगबाट ओलीले देशलाई बचाउनुनै छ । ओली र कम्यूनिष्ट सरकारसँग नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने सुनौलो अवसर र चुनौति दुवै छन् । नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले सडक बनाएपछि त्यसको तरंग एकपटक फेरी माइतिघर मण्डला र संसदभित्र देखापरेको छ । विश्व महामारीबाट आतंकित भइरहेका बेला भारतले आफ्नो विस्तारवादी छविलाई कालापानीमा प्रकट गरिरहेको छ ।